China Ipensela ifektri abakhiqizi | SJJ
Qalisa ukubhala noma ukudweba. Yonke into esetshenziselwa amapensela amahle, amapensela we-unicorn, ipensela yekhabhoni kanye nekhithi yepensela ehlukahlukene i-eco-friendly, iphephile ezinganeni futhi ingahlangabezana nezindinganiso ezahlukahlukene zokuhlola.
Ipensela iyithuluzi lesandla lokubhala noma lokudweba, imvamisa libhalwe ephepheni. Izinduku eziningi zamapensela zenziwe nge-graphite powder exutshwe nesibopheleli sobumba okulula ukusula. Izindwangu zamapensela ezivame kakhulu zenziwe ngokhuni oluncane, imvamisa luyindilinga, luyingxenye enamacala ayisithupha, kepha kwesinye isikhathi luyindilinga noma lunxantathu. Ukhiye ongaphandle ungenziwa ngezinye izinto, njengeplastiki, ukuthutheleka noma iphepha. Ukuze usebenzise ipensela, ikesi kufanele liqoshwe noma lihlutswe ukuze kuveze ukuphela kokusebenza komongo njengephuzu elibukhali lokuthi abantu baziveze.
Ipensela iyinsimbi elula kodwa ephathekayo ephathekayo ehlangabezana nezidingo zehhovisi lakho futhi ifunda ngenxa yemigqa yayo emnyama ebushelelezi. Ipensela ye-HByisilinganiso sokubhalwa kwansuku zonke. Ungenza futhi amamaki aholayo ahlukene ngezidingo ezahlukahlukene futhi wakhe noma u-ode ipensela lakho elihle ezinhlanganisweni zombala kufaka phakathi umugqa owodwa wombhalo namafonti amaningi. Ngaphandle kokusebenzisa ipensela, ungafaka i-logo yakho ekwenyuseni noma ekukhangiseni umkhiqizo wakho ngezindleko eziphansi, sicela uqinisekise ukuthi i-graphite eyinsalela ephuma kupeni wepensela ayinabo ubuthi, futhi i-graphite ayinabungozi uma idliwe, abantu bazogcina ngokuqaphela noma ngokungazi engqondweni uma usebenzisa, ngakho-ke kusobala ukuthi lokhu kuzoba ngenye yezinto ezinhle kakhulu zokwenyusa ekukhetheni.
Yenziwe nge-basswood, gcwalisa kabusha i-graphite. Ama-brushstrokes entekenteke amelana nokudonsa futhi kulula ukuwahlanza.
Amabanga okuhola: Kubalwe kusuka kusithambile kuya kokunzima kakhulu: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, no-9H.
Isiphetho se-Satin-smooth sokubamba okuphephile nokunethezeka
Ukukhethwa kwezinto ezibonakalayo: Amapensela we-Graphite，Amapensela aqinile e-graphite，Amapensela we-Liquid graphite，Amapensela amalahle，Amapensela ekhabhoni，Amapensela anemibala，Amapensela okugcoba，Amapensela we-Watercolor
Ukukhethwa komumo: Unxantathu, u-Hexagonal, Round, Bendable
Ilungele kakhulu izipho zokuphromotha, izikhumbuzo, izipho zosuku lokuzalwa, njll. Kuhle kakhulu ezikoleni, emakhaya nasehhovisi.
Langaphambilini Abicah Abanye
amapensela enziwe ngokwezifiso
Imisila yenkomo ye-LED
Amathegi e-Pet ID